Aung Win Hein (Noble): 10/04/12
ချစ်တဲ့စိတ်ဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုမှာ အခြေခံတယ်။
စိတ်ဆင်းရဲနေရင် မိဘတောင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာ မပြောနိုင်ဘူး။
အော်မယ်။ ငေါက်မယ်။ ဆူမယ်။ ရိုက်မယ်။
စိတ်ငြိမ်းချမ်းနေ၊ လွတ်လပ်နေ၊ စိတ်ချမ်းသာနေမှ
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် အားရှိသလို ခံစားရတယ်။
အားငယ်နေတဲ့သူဟာ အဲဒီအားငယ်စိတ် မပျောက်သရွေ့ တစ်ယောက်ယောက်က
သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာကိုမရမက လိုချင်နေတယ်။
လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အချစ်ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နှောင်ဖွဲ့ဖို့
ကြာရင်နှစ်ဦးလုံး မလွတ်လပ်ဘူးလို့ ခံစားရလိမ့်မယ်။
မလွတ်လပ်ဘူးလို့ ခံစားရရင် သူ့ဘဝကို ကိုယ်က လွှမ်းမိုးပြီး
သူ့ကို ကိုယ်လိုသလို ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်။
ကိုယ့်ကိုလည်း သူက သူလိုသလို ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် လိုသလို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားပါ။
သူများကို လွှမ်းမိုးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။
အချစ်ခံချင်လွန်းတဲ့သူကို ဘယ်သူမှ တာရှည် မချစ်နိုင်ဘူး။
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာသလို သူများကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့သူကို
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်တယ်ဆိုရင်
ကိုယ်က အဆင်ပြေနေရင် သူများအဆင်ပြေဖို့ကို စဉ်းစားပေးနိုင်တယ်။
ကိုယ်က အဆင်မပြေရင် ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ပဲ စဉ်းစားနိုင်မယ်။
ကိုယ်မှ အဆင်မပြေပဲနဲ့ သူများ အဆင်ပြေဖို့ ဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်မလဲ။
ကိုယ်မှ လဲနေရာကနေ မထနိုင်ရင် နောက်တစ်ယောက် လဲနေတာကို ဘယ်လိုကူပြီး
ကိုယ်က စိတ်ချမ်းသာနေရင် သူများကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အကူအညီပေးနိုင်တယ်။
ကိုယ်က သောကတွေများနေရင် နောက်တစ်ယောက်ရဲ့သောကကို နားတောင်မထောင်ချင်ဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ်က စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာဟာ သူများအကျိုးကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့
ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပထမ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။
A happy heart isaloving heart!
ရွှင်လန်းတဲ့စိတ်ဟာ ချစ်တတ်တဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
You cannot feel love toward another unless you are happy.
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူဟာ သူများက သူ့ကို ချစ်တာကို
သူကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ တကယ် မချစ်ဘူး။
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့မြေမှာ ရှင်သန်တယ်။
သူ့ဆီက ဘာမှ မျှော်လင့်စရာ မရှိဘူး။
သူက ကိုယ့်ကို ဘာမှ ပြန်မပေးနိုင်ဘူး။
အဲဒီလိုလူကို ကိုယ်က ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ။
အဲဒါကိုကြည့်ရင် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် နေနိုင်တယ်။
သူ့ဆီက ငါ ဘာရမလဲ ဆိုတာကို တွက်တယ်။
သူ့ဆက်ဆံရေးဟာ ရဖို့ကို အဓိကထားတယ်။
ရဖို့အဓိကထားရင် စိတ်ဓာတ် တကယ်မရင့်ကျက်သေးဘူး။
ဥာဏ်ပညာ ရှိတဲ့သူဟာ ကြင်နာတတ်တယ်။
ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားမရှိရင် လူသားလို့ ဘယ်လို ပြောနိုင်မလဲ။
ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဥာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။
မကြင်နာတတ်တဲ့သူဟာ ဥာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
တခြားအကြောင်းတွေကို ဘယ်လောက်ပဲနားလည် နားလည်
လူကို နားမလည်ရင် ပညာတတ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
လူလူချင်း သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ ဆက်ဆံနိုင်မှ ပညာတတ်လို့ ဆိုနိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့ဘဝကို လိုချင်ရင် သဘောထားမှန်မှန်နဲ့
ပန်းပင်တွေကို ပြုစုမှ အပွင့်လှသလို ဆက်ဆံရေးကို ပြုစုမှ
စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ လှပတဲ့ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကူညီတတ်တာ၊ ကြင်နာတတ်တာ၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တာဟာ
စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်တယ်။
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်တာ ပညာရှိတဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ချင်းမစာတတ်သေးရင် စိတ်ထားမြင့်မြတ်မှု မရှိသေးဘူး။
စိတ်ချမ်းသာအောင်မှ မနေတတ်သေးရင် ဘာပညာမှ မရှိသေးဘူး။
ယူလည်းယူတတ်တဲ့သူဟာ မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်တယ်။
သင့်မှာရှိတဲ့ ရွှေငွေတွေက သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးနိုင်တော့တဲ့အခါ
ဘယ်ဟာကမှ သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးနိုင်တော့တဲ့အခါ
မေတ္တာက သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးလိမ့်မယ်။